नेपालको समर्थनमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले यस्ताे ट्वीट गरेपछि भारतभर हंगामा, कसले के भने ? -
काठमाडौं । सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको छ । यसमा थुप्रै नेपाली खुसी भएका छन् । तर नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिसहित नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अहिले त्यो बिषयले भारतभर भूकम्प ल्याइदिएको छ ।
यस्तै नेपाली मूलकी बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाले पनि नेपाल सरकारको यो कदमको समर्थन गर्दै एउटा ट्वीट गरिन् । मनिषाको यो ट्वीट भारतभर हं’गामा सुरु भएको छ । को’इरालाले नेपाललाई सपोर्ट गरेको उनका भारतीय प्रशंसकलाई मन परेन र उनीहरुले ट्वीटरमा अश्लिलदेखि अपच हुने खालका कमेन्ट गरेका छन ।
मनिषाले आफ्नो ट्वीटमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुका साथै भारत, नेपाल र चीनको कुरा उठाउँदै भनिन्, ‘सबै तीन महान देशबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक छलफलको आशा गर्दछु ।’ उनको यहि ट्वीटको जवाफमा कमेन्टको वर्षा भएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले छिटै सार्वजनिक गर्दैछ ।
ट्वीटरका केही प्रयोगकर्ताले नेपाललाई चीनसँग सतर्क रहन सल्लाह दिएका छन् । एकजनाले लेखेका छन्, ‘नेपाल चीनसँग सतर्क रहनुपर्छ, नभए नेपालको पनि हालत तिब्बतको जस्तै होला ।’ यस्तै अर्का एक व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘तपाईं आफ्नो ठाउँमा सही हुनुहुन्छ । हामी भारतीय पनि अब तपाईंहरुले झैं सोच्नेछौं ।’
नेपालको यो कदमलाई नरुचाएका अर्का एक व्यक्तिले लेखे, ‘नेपाल सधैं भारत वि’रोधी रहँदै आएको छ र उसको नजर सधैं भारतको भूमिमा छ । लिपुलेखजस्तो भारतको अभिन्न अंगमा जबर्जस्ती दाबी गरिनुले नेपालको तुच्छ मानसिकता दर्साउँछ ।’
कतिले मनिषाले नेपालको समर्थन गरेको भन्दै निकै गालीसमेत गरेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘ल हेर, खान्छे भारतको र गाइरहेकी छे भिन्न राग । यसलाई भारतबाट लखेट । यसको फिल्म बहिष्कार गर । ’ यस्तै अर्का एक व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘अर्की एउटी ‘नमक हराम’ ।’
यस्तै अर्का एक व्यक्तिले मनिषालाई बहिष्कार गर्न माग गर्दै लेखेका छन्, ‘भारतबाट आफ्नो पहिचान बनाउने तपाईं यस्तो मुद्दामा भारतको समर्थन गर्नुको साटो नेपालको अवैध मानचित्रको समर्थन गरिरहनुभएको छ ? भारतीय फिल्म उद्योगले तपाईंलाई पर्याप्त चर्चा र पैसा दियो र तपाईंले हामीलाई यो दिनुभयो ?’
तर उनका नेपाली फ्यानहरुले भने उनलाई उनको प्रशंसा गर्दै कमेन्ट र रिट्वीट गरिरहेका छन् । ‘मनिषाले आफ्नो भुमि रक्षाको सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा गरी देस भक्ति देखाउंदा,बिचलित मानसिकता बोकि राग,द्वयस बोकि उनी प्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने भारतियहरूले आफ्नो भुमि गुम्दाको पिडा कहिल्यै महशुस गेरेका छन?पेशा परिवर्तन गर्न सकिन्छ देस परिवर्तन गर्न सकिदैन।धन्यवाद मनिषा’ एक व्यक्तिले भनेका छन् ।